စကားလုံးများနဲ့ ​နေ၀န်းနီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » စကားလုံးများနဲ့ ​နေ၀န်းနီ
Posted by naywoon ni on May 18, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 18 comments
​နေ၀န်းနီတို့ ကဗျာသမား​တွေက စကားလုံး တစ်​လုံးရဲ့ တန်​​ကြေးကို ဘ၀နဲ့ တိုင်းတာကြတာ ။ ဘယ်​​လောက်​ထိ တန်​​ကြေးထားလဲ ? ရုရှားက ကဗျာဆရာ ယက်​တူရှင်​ကို က သူ့​ကောင်​မ​လေး ကို​ပြောတယ်​ ။
” မာရီယာ ……
မင်းနာမယ်​​လေး ငါ့​မေ့သွားမှာ စိုးလှတယ်​
ကဗျာဆရာ ​မေ့သွားမှာ​ကြောက်​သလိုပဲ ”
တဲ့ ။ ကဗျာဆရာ ဟာ သူသုံးဖို့ ရှာ​တွေ့ထားတဲ့ စကားလုံးတစ်​လုံးနဲ့ ချစ်​သူရဲ့ နာမယ်​စလုံး​လေး တင်​စားပီး​ပြောတာ ။ သာမာန်​ဆိုရင်​ အဓိပ္ပာယ်​ မရှိသလို​ပေမဲ့ ကဗျာသမား​တွေ အတွက်​​တော့ အဓိပ္ပာယ်​ ကျယ်​၀န်းလှပါရဲ့ ။ ကျုပ်​တို့ဆီက ကဗျာဆရာ​တွေမှာလဲ သူ့ ​ဖေးဖရိတ်​ စကား လုံး​လေး​တွေရှိတယ်​ ။ ​ရှေ့လူက သုံးနှုန်းသွားတဲ့ စကားလုံး ​နောက်​လူက လိုက်​မသုံးကြဘူး ။ အခု​နောက်​ပိုင်းကျမှသာ စည်းကမ်းပျက်​သလို ဖြစ်​သွားတာ ။ တစ်​​ယောက်​က သုံးလိုက်​လို့ လူသိများသွားရင်​ ​နောက်​လူက လိုက်​မသုံးကြဘူး ။ ​ရှောင်​တယ်​ ။ ဥပမာ – ဒဂုန်​တာရာ ရဲ့ သူသိများတဲ့စကားလုံး​တွေဖြစ်​တဲ့
စသည်​ဖြင့်​ တစ်​​ယောက်​ချင်းစ်ီမှာ မူပိုင်​လို ဖြစ်​​နေတဲ့ စကားလုံး​တွေရှိတယ်​ ။ မသုံးမဖြစ်​လို့ သုံးချင်​ရင်​​တောင်​ မူရင်းပထမ သုံးသွားတဲ့ လူနာမယ်​နဲ့ တွဲသုံးတယ်​ ။ ကိုယ်​ပိုင်​လို သ​ဘောထားပီး ခပ်​တည်​တည်​ ယူမသုံးဘူး ။ သုံးဖို့ရာ ၀န်​​လေးကြတယ်​ ။ လမ်း​ဘေးက ​ဆေးလိပ်​တို ​ကောက်​​သောက်​ချင်​ရင်​ ​ကောက်​​သောက်​မယ်​ ။ ​ရှေ့ကလူ သုံးသွားလို့ လူသိများတဲ့စကားလုံးကို ​နောက်​က​နေ အလွယ်​တစ်​ကူလိုက်​မသုံးဘူး ။ လိုက်​သုံးတာကိုလဲ လက်​မခံဘူး ။
​နေ၀န်းနီ တို့ကဗျာ စ​ရေးကာစက မန္တ​လေးမြို့က ကဗျာဆရာ ကိုလင်းသူ ဆိုတာရှိတယ်​ ။ သူက မိုး​ဝေ ကဗျာ​ခေတ်​ကို ဖြတ်​သန်းလာတဲ့သူ ။ ကဗျာ တစ်​ပုဒ်​​ရေးပြီးလို့ သူ့ဆီသွားပြရင်​ အဲ့လို ​ရှေ့က သုံးထားတဲ့စကားလုံး ပါလို့က​တော့ ချက်​ချင်း ပြင်​ခိုင်း​တော့တာ ။ ​နောက်​ အသုံးမရှိ​တော့တဲ့ ​ပေါရာဏ စာလုံး​တွေ ထည့်​​ရေးတာ မကြိုက်​ဖူး ။ အများနဲ့ ဆန့်​ကျင်​ပြီး​ရေးတာလဲ သ​ဘောမကျဘူး ။ အဲ့​တော့ ​နေ၀န်းနီ နဲ့က မတည့်​ဘူး ။ သူက ​နေ၀န်းနီကို အများနဲ့ ဆန့်​ကျင်​ပြီး ကပ်​တီးကပ်​ဖဲ့​ရေးလို့ သူပုန်​ ကဗျာဆရာ တဲ့ ။ အဲ့အချိန်​ ၁၆ နှစ်​သား ​နေ၀န်းနီက တရုပ်​ပြည်​​ပေါ်မှ ကြယ်​နီ တစ်​ပွင့်​တို့ လီနင်​တို့ ကပ်​စထရို တို့ နုရင်​ဘန်​ထရိုင်း တို့ ဖတ်​​နေပီ ။ ​ကျော်​မြသန်းရဲ့ ” ကျွန်​​တော်​ လက်​နက်​ချ” စာအုပ်​ကို လွယ်​အိတ်​ထဲ မှာ အမြဲ​ဆောင်​ထားတာ ။ ကြိုက်​လို့ ။ ရာဇတ်​ခန်းမ စာကြည့်​တ်ိုက်​က ငှားပီး​တော်​​တော်​နဲ့ ပြန်​မ​ပေးပဲထားတာ ။ သူနဲ့ အ​ချေအတင်​ စကား​ပြောရတာက ​နေ၀န်းနီ ခု ထိ ကြိုက်​​နေတဲ့
ဆိုတဲ့စကားလုံး ​တော်​​တော်​​လေး အငြင်းအခုန်​ဖြစ်​ပီး​တော့ သူ့ဆီမသွား​တော့ဘူး ။ တစ်​ပတ်​​လောက်​ရှိ​တော့ ကိုလင်းသူမ​နေနိုင်​ဘူး ။ ​နေ၀န်းနီ အ​ဆောင်​လိုက်​​ခေါ်ပီး​ချော့တယ်​ ။ ​ရှေ့ကလူ​တွေ သုံးနှုန်းပီးသား စကားလုံးမ​ဟုတ်​လို့ အသစ်​အဆန်း ကိုယ်​ပိုင်​ဖန်​တီးတာ မို့ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ​လျော့ချလိုက်​တယ်​ ။ အဲ့​တော့ ကဗျာ​ရေးသူ တစ်​​ယောက်​ဟာ သူတစ်​ကာ ဖန်​တရာ​တေ​အောင်​ သုံးနှုန်းပီးသား စကားလုံး​တွေကိုလဲ လိုက်​မသုံးဘူး ။ ကိုယ့်​ဖာသာကိုယ်​ပဲ စကားလုံး​တွေကို ကျစ်​လစ်​​အောင်​ဖန်​တီးတယ်​ ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်​ပဲ ​ရှေ့က လူ ဖန်​တီးသုံးနှုန်းသွားတဲ့စာသား​ပေါ်မှာ အလိုက်​သင့်​ သုံးပီး အဓိပ္ပာယ်​ က​ပြောင်း ကပြန်​ဖြစ်​​အောင်​ ​လျှောက်​လုပ်​​နေမယ်​ဆိုလဲ ရှုံ့ချတယ်​ ။ ဒါ ​​ပေါ်ပင်​ သမား ။ ကဗျာ သမား အစစ်​မဟုတ်​ဖူး ။ ပွဲလှန့်​ ဖျာခင်းပီး ​နေရာဝင်​ယူဖို့ ကြိုးစားတာ ။
​နောက်​ မတူတဲ့ အ​ကြောင်းအရာ တစ်​ခုနဲ့ တစ်​ခု စကားလုံး​တွေနဲု့ဇွတ်​အတင်း မဆက်​စပ်​ဖူး ။ ​နောက်​မှ စကားလုံး​တွေနဲ့ အသုံးပြု ပုံဆက်​​ပြောဦးမယ်​ ။ စိတ်​၀င်​၇စားတယ်​ ဖတ်​ချင်​​သေးတယ်​ ဆိုရင်​​ပေါ့……..။
ယူအက်စ်မှာတော့.. အများပိုင်စကားလုံးတိုင်း.. ကော်ပီရိုက်တင်လို့မရသလို.. တချို့အတွဲတွေကလည်း.. ကောပီရိုက်ရှိတယ်..။
ဒီလပိုင်း.. ကော်ပီရိုက်..။ မူပိုင်..။ ဖဲယားယူစ်တွေနဲ့ပါတ်သက်တဲ့.. စင်မနာတွေတော်တော်တက်ဖြစ်တယ်..။
No. There isalot of misunderstanding about this. Names are not protected by copyright. Publishers of works such asastar registry may registeraclaim to copyright in the text of the volume [or book] containing the names the registry has assigned to stars, and perhaps the compilation of data; but sucharegistration would not extend protection to any of the individual star names appearing therein. Copyright registration of suchavolume of star names does not confer any official or governmental status on any of the star names included in the volume. For further information on copyright protection and names, see Circular 34, Copyright Protection Not Available for Names, Titles, or Short Phrases.
ဒါမျိုးအကြောင်းအရာတွေ အဘနီတို့လို စာပေသမားတွေပြောလို့မှ
ကျနော် ကဗျာ စာပေကို ချစ်တယ်လို့ မပြောတော့ဘူး
အခု ရေးပြသွားတာတွေကိုလည်း ရင်နဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်။
နားထောင်ရုံ လေ့လာရုံသက်သက်ပဲ လုပ်နိုင်သေးလို့ပါ
ပြင်လိုက်ပါ့မယ် ဗျို့ ။
သဂျီး နဲ့ မော့မော့များကယ်ဂျဘာ
Fair Use ဆိုတာရှိပါတယ်..
ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆိုရရင်တော့.. ကော်ပီရိုက်လုပ်ထားတာတွေကို.. လေ့လာ..စိစစ်..ဝေဖန်.. ကော်မန့်ရေး.. သတင်းအဖြစ်တင်.. စာအဖြစ်သင်ကြားပို့ချ.. ရီဆခ်ျလုပ်.. စတာတွေမှာ… ယူသုံးလို့ရပါတယ်..။
အဓိကအချက်က.. အဲဒီကော်ပီရိုက်ထားတာတွေကနေ.. အကျိုအမြတ်တခုခုရသလား.. ယူသလားနဲ့ဆုံးဖြတ်ရတာပါ..
မြန်မာဆန်ဆန်ဆိုရရင်တော့.. လူ့ကျင့်ဝတ်ကို ..စောင့်ပါတယ်ပေါ့..။
သူတပါးအခွင့်အရေးကို.. ကိုယ်က.. .ဖေါက်ထားသလား.. ပြန်စိစစ်ကြည့်ဖို့ပဲ..
ဘိုလိုဆိုရင်တော့.. ထာဝရဘုရားဆီမှာ (တချိန်ကျ) ၀န်ခံရဲလားနဲ့ကြည့်ပေါ့…။
Fair use is one of the traditional safety valves intended to balance the public’s interest in open access with the property interests of copyright holders.
စိတ်ဝစားစွာ ဆောင့်ဖတ် အယ် စောင့်ဖတ်နေပါတယ်
လို့ ရေးပါအူး ဗျို့ 
ကိုခိုင်​​ရေ့ မြန်​မာလို ပြန်​ထားတာ မရှိဘူးလားဗျ ဘာသာပြန်​ဖတ်​​နေကျဆို​တော့ အဲ့ဒိ အီးက ​ကျောင်းပြန်​သွားပီဗျ တစ်​လုံးချင်း​တောင်​ အသံမနဲထွက်​​နေရ ………..
လောလောဆယ်မှာကို.. စာအုပ်၂အုပ်နဲ့.. စင်မနာကဖိုင်တွေရှိနေတာ.. ဘာသာပြန်ပေးချင်တာ.. :buu:
မြန်မာပြည်မယ်.. ကော်ပီသီချင်းကစလို့.. အနုပညာ.. ပစ္စည်းထုတ်ကုန်.. အင်တာနက်အသုံး.. တော်တော်များများ.. တော်တော့်ကိုများများ.. ကော်ပီရိုက်.. ပက်တန့်.. ထရိတ်မတ်ခ်.. စတာတွေနဲ့ညိနေတာပါ…။
အနော့်ဆီ အပ်လေ ဒဂျီး
မီးတို့က စာနဲ့ ပေနဲ့ အတော်ဝေးပါတယ်ကိုနီ။
ဒါမဲ့ ဖတ်သွားကြောင်း လာပြောတာ။
စာဖတ် စာမှတ်တာ များတဲ့သူမို့
သူများစကားလုံးကိုပဲ စွဲနေ သုံးနေမိတယ်ဗျ
ဒီစာကိုလည်း မှတ်သွား ဖတ်သွားတယ်ဗျာနော
ထပ်ပြီး ကြားပါရစေ ဆြာနေ …
ကဗျာ ဝါသနာရှင်တစ်ယောက် အနေနဲ့
ကဗျာ ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ စကားလုံး ဆိုတာကို
ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံအရ …
တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ်တွေ့ရှိလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေဟာ
အဟောင်းတွေနဲ့ သွားသွားပြီး ဆင်တူနေတာကို တွေ့မိသဗျ …
ဒီအခါ ဖီးလ်တော့ နည်းနည်း အောက်သွားတတ်တယ် …
ဒီပို့စ်မတွေ့လို့ ဟိုဖက်မှာ မန့်ခဲ့သေးတယ်။
ကျမတို့က စုတု ပဲရှိသေးတော့ စကားလုံးသစ်မသုံးတတ်သေးဘူး။
သကြားပြောသလိုပဲ ချ ရေးမယ်ဆို ဆရာ့ဆရာတွေရဲ့ စာတွေ သီချင်းတွေ ကဗျာတွေပဲ ၀င်လာတယ်။
အဲဒါလေး လူတိုင်းသိပြီးသားလေး ညွှန်းပြီးရေးရတာ ပိုထိတယ်ထင်မိ(သူများပိုနားလည်မယ်လို့ထင်တာ)
စုရင်း တုရင်းနဲ့ပဲ ​ရှေ့ကလူသုံးသွားတဲ့ စကားလုံး ကိုယ့်​စကားလုံးဖြစ်​​အောင်​ ဖလှယ်​တန်​တာဖလှယ်​ ကုလားဖန်​ထိုးတန်​တာ ထိုးနဲ့ လိုချင်​တဲ့ အဓိပ္ပာယ်​​ရောက်​​အောင်​ သုံးခဲ့ ရတာပဲ ။ ညကျမှ စကားလုံးများရဲ့ အဓိပ္ပာယ်​ ရှာပုံ​တော်​ကိုတင်​​ပေးပါ့မယ်​ ။ အစ​တော့မလွယ်​ဘူး​ပေါ့ ။ ​နောက်​​တော့လည်း အသားကျသွားတာပါပဲ ။ ကျွန်​​တော်​​ရှေ့မှာ​ရေးခဲ့တယ်​​လေ ” တစ်​ကယ်​ဆို ဖြဲတတ်​ဖို့ပဲ လိုတယ်​ ” ဆိုတာ အမှန်​အတိုင်းဝန်​ခံရရင်​ ” တစ်​ကယ်​ဆို အချစ်​ပဲ လိုတယ်​ ” ဆိုတဲ့ သီချင်းစာသားကို ဖလှယ်​သုံးခဲ့တာပဲ ။ စကာလုံး အစားထိုးတယ်​လို့ လဲ ​ပြောမရဘူး ။ အချစ်​ ဆိုတာက နာမ်​ ဖြဲတတ်​ဖို့ ဆိုတာက ကြိယာ အဲ့​နေရာမှာ နာမ်​ တစ်​ခုခုကို ထည့်​သုံးရင်​​တော့ စကားလုံး အစားထိုးသုံးတယ်​ ​ပြောလို့ရမှာ​ပေါ့ ။ ခု ကြိယာ ညှပ်​သုံးလ်ိုက်​တဲ့ အတွက်​ ​ပြောမရ​တော့ဘူး ။ အဲ့ဒိလို ဖလှယ်​တာ​တွေ ​ရှေ့​နောက်​လှန်​ပစ်​တာ​တွေ နဲ့ စု တု ပြု ကြတာ​ပေါ့ ။
ဆာလား = ယောက်ဖ
ကျနော့် ကဗျာတွေရော ဆရာပြောသလို လွတ်ကင်းရဲ့မသိ….ဒါပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ လိပ်ပြာသန့်တယ်။ ခိုးမခြဘူး မကူးယူဘူးဆိုတာကိုလေ..။
မှတ်တမ်းတင်နိုင်လောက်တဲ့ စကားလုံးလှလှလေးတွေ ဘယ်လိုများစဉ်းစားပြီး ရေးကြလဲ မသိဘူးနော်။ ကျွန်မထွင်ထားတဲ့ စကားလုံးဆိုတာတော့ မရှိသေးဘူး။ ဆမာကဒါ နိုင်ငံတော်ဆိုတာပဲ ပေါက်တတ်ကရ ရှိတယ်
ထွင်​တာမဟုတ်​ဘူး အ​ကြောင်းအရာတစ်​ခု​ပေါ်မှာ အာရုံခံစားရင်းနဲ့ သူ့အလိုလို စီးဆင်းလာတာမျိုး တစ်​ခါ ​ရှေ့ကလူ သုံးပီးသားမှန်းသိလို့ ​ရှောင်​လွဲသုံးရင်းနဲ့ အ​ကြောင်းအရာနဲ့ဟတ်​မိပြီး လှသွားတာမျိုးပါ moonpoem ရင်​မှာခံစားမိတဲ့အ​ကြောင်းကိစ္စ တစ်​နဲ့ပဲ ပတ်​သက်​ပီး စဉ်းစား​နေကြည့်​ စိတ်​ကူး​နေကြည့်​ သူ့ဖာသာ စကားလုံး​တွေစီးဆင်းလာပါလိမ့်​မယ်​ ။ ရင်​ထဲမှာ​မွေးမထားပဲနဲ့ ချက်​ချင်းချ​ရေးတဲ့အခါ ဖတ်​ရတာလဲ ဇိမ်းဆတ်​ဆတ်​ စကားလုံး​ထောက်​​နေတဲ့​နေရာက ​ထောက်​​နေတတ်​တယ်​ ။ တစ်​ခု​လောက်​စမ်းကြည့်​ပါလား